Iwebhusayithi ye-Elementor Cloud: Yakha Indawo Yakho Ye-WordPress ye-Elementor Kulokhu Kusingathwa Okuzinikezele Okusekelwe Ngokugcwele | Martech Zone
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengisiza iklayenti ekwenzeni kahle iwebhusayithi yabo eyakhelwe ku-WordPress nokusebenzisa I-Elementor Builder… engikholwa ukuthi iyona engcono kakhulu ongayithola. Ifakwe ohlwini njengenye yami ama-plugin anconyiwe e-WordPress.
Ngesinye isikhathi, i-Elementor Builder yayiyisengezo esihle kunoma iyiphi itimu. Manje, umakhi useqine kangangokuthi ungakwazi ukwakha noma imuphi umklamo osuka endikimbeni ngoba unomtapo wolwazi obanzi wamakhasi nezakhiwo ze-athikili. Ngamawijethi amangalisayo angaphezu kuka-+100 nezifanekiso ezingu-300+, ungakha noma yiluphi uhlobo lwewebhusayithi ongalucabanga. I-Elementor ihambisana ngokuphelele nayo WooCommerce kanjalo.
I-WordPress ingaba nzima kakhulu ukuxazulula inkinga nokulungisa lapho kunenkinga. Uma isayithi lakho le-WordPress linezinkinga, umphathi wakho uzovame ukusola itimu yakho, ukusekelwa kwetimu yakho kuvame ukusola ama-plugin akho, futhi ukwesekwa kwakho kwe-plugin kungase kusole ukusingathwa kwakho ... kungathatha umzamo omncane ukubethelela umthombo wenkinga. futhi uthole isixazululo. Ukwenza kanjalo, kufanele ube nolwazi oluningi ekuthuthukiseni nasekusebenziseni i-WordPress… okwehlula inhloso yokusebenzisa lezi zixazululo ezingaphandle kwebhokisi.
Kodwa kuthiwani uma ungahlanganisa ukusingathwa, izipele, itimu, nokusekelwa kwe-plugin konke ngesixazululo esisodwa, esithengekayo? Ungakwazi…
Sethula Iwebhusayithi ye-Elementor Cloud
U-Elementor uthathe igxathu elikhulu phambili ngokwethula inkundla yakhe yokubamba, Elementor Cloud.
Uthola zonke izinzuzo ze-Elementor Pro, ngokusekelwa kwayo yonke into kusukela kumhleli ukuya ekusingatheni:
Intengo Yonyaka ingu-$99 ngaphandle kwezimali ezifihliwe
Ukusingathwa okwakhelwe ngaphakathi kusuka ku-Google Cloud Platform
Vikela i-CDN nge-Cloudflare
Isitifiketi samahhala se-SSL nge-Cloudflare
Isitoreji se-20 GB
I-bandwidth engu-100 GB
100K ukuvakasha kwanyanga zonke
Uxhumano lwesizinda ngokwezifiso lwamahhala
Isizinda esingaphansi kwesinye samahhala ngaphansi kwe-elementor.cloud
Izipele ezizenzakalelayo kanye njalo emahoreni angama-24
Ukukhiya isayithi ukuze ugcine iwebhusayithi esaqhubeka nomsebenzi iyimfihlo
Izipele ezenziwa ngesandla kusuka I-Elementor Yami i-akhawunti
Konke kungaphathwa kusukela ku- I-Elementor Yami ideshibhodi. Yilapho ongafinyelela khona ideshibhodi yakho ye-WordPress, uxhume isizinda ngokwezifiso, usethe isizinda sakho esiyinhloko, uvule futhi uvale i-Site Lock, uphathe izipele, ubuyisele iwebhusayithi uma kudingeka, kanye nazo zonke ezinye izenzo eziwusizo.
Iwebhusayithi ye-Elementor Cloud kuyindlela enhle yabadali bewebhu abafuna ukugxila ekudaleni amawebhusayithi kalula, njengoba bethola isisombululo esingabizi kakhulu sokugcina ngaphansi kophahla olulodwa. Futhi, kuhle kunoma ubani owakha amawebhusayithi amaklayenti, njengoba enza inqubo eqondile yokunikezela futhi enze ukunakekelwa kube lula.
Thola Iwebhusayithi Yefu
Ukudalulwa: Singabanikazi be- Elementor, I-Elementor Yami, Futhi Iwebhusayithi ye-Elementor Cloud futhi zisebenzisa lezi nezinye izixhumanisi ezihambisanayo kuso sonke lesi sihloko.
Tags: best WordPress pluginselementorifu elementorelementor ifu iwebhusayithiiproor proorinkundla ye-google cloudumqambi wamiumakhi wekhasisslWooCommerceWordPressizipele ze-wordpressi-wordpress hostingizifanekiso ze-wordpressamawijethi we-wordpress
Ukuze Uhehe Ukubhalisela I-imeyili, Abashicileli Kumele Bafakazele Amandla Okwenza Okuthandwa Nguwe Ngokubhalisa Kokuqukethwe
Kungani Umsindo Ungaphandle Kwekhaya (AOOH) Ungasiza Ukuholela Uguquko Kude Kumakhukhiki Ezinkampani Eziseceleni